Asan-dahalo tany Betroka : Zandary iray sy dahalo 5 namoy ny ainy -
AccueilSongandinaAsan-dahalo tany Betroka : Zandary iray sy dahalo 5 namoy ny ainy
Nafana ny fifandonana tamin’ny dahalo tany amin’ny distrikan’i Betroka. Dahalo dimy namoy ny ainy, zandary iray kilasy ambony antsoina hoe Rakotoarison Jeannot no maty voatifitra, kaomanda iray kosa naratra voatifitra teo amin’ny feny, ka nalefa haingana notsaboina tany amin’ny hopitaly. Izany ny vokatry ny fifandonana teo amin’ny zandary miasa ao amin’ny borigady Isoanala sy ny ao ao amin’ny USAD “Unite special anti-dahalo” avy any Betroka, ny sabotsy 10 novambra lasa teo, tany amin’ny fokontany Isoanala kaomina Ambatomivary. Dahalo miisa 50 nirongo basy sy zava-maranitra no nandroba, ka nangalatra ireo omby manodidina ny 100 hoentina hamidy talohan’io fifandonana io. Nandositra namonjy nianavaratra andrefana ireo olon-dratsy ireo rehefa nahazo ny hazany, saingy tsy nanaiky mora foana izany ny fokonolona sy ny zandary ka nanao ny fanarahan-dia faran’izay haingana rehefa nandre ny zava-nisy.
Tratran’ny vela-pandriky ny dahalo izay naman’ireo olon-dratsy ihany ireto zandary. Tifitra variraraka no nitsena teny an-dalana hamonjy ny kizo nitondran’ireo olon-dratsy ireo omby halatra, ka nahatonga ny voina. Na dia teo aza izany, tsy nijanona teo fa nanohy ny fanarahan-dia hatrany ireo zandary ambiny. Vaky nandositra niaraka tamin’ireo omby an-jatony ireo dahalo ireo. Fotoana elaela taorian’izay dia nisy sasantsasany tamin’ireo zandary no nanao fitsirihana nisava lalana teny amin’ny toerana izay nialan’ireo dahalo ireo. Mbola nisy dahalo vitsivitsy anefa tavela teo, namaly tifitra ihany koa ny mpitandro filaminana ka lavo ireto farany, ny namany kosa mbola nahavita nandositra. Nisy ny fandraisan’andraikitra haingana izay natao tamin’ity zandary naratra ity, satria taorian’ny famonjena azy tao Isoanala dia nalaina tamin’ny angidimby tany an-toerana izy io, ka efa mahazo ny fitsaboana sahaza azy. Mbola mitohy ny fanenjehana ireo dahalo tafaporitsaka.
Efa ao anatin’ny volonandro fety tanteraka isika eto Madagasikara. Hankalazaina rahampitso ny tsingerintaona faha-58 niverenan’ny fahaleovan-tena. Toa ny isan-taona dia misy ny « Podium » hiarahana amin’ireo mpanakanto maro. Amin’ity taona ity dia hampiantrano izany ...Tohiny